China Magnetic Mat, Magnetic Adhesive Mat, Magnetic Sheets Manufacturer and Supplier
Guangzhou New Magnetics Technology Co.,Ltd [Guangdong,China] Business Type:Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:11% - 20% Certs:ISO9001, RoHS, Test Report Description:Magnetic Mat,Adhesive-Back Magnet Mat,Magnetic Sheet,Magnetic Adhesive Self,Magnet Mat,
Ny vokatra avy amin'ny Mat , mpanofana manokana avy any Shina, Magnetic Mat , Adhesive-Back Magnet Mat mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Magnetic Sheet R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Magnet Roll Magnet - Magnet miaraka amin'ny fanohanana tohina Magnet Mat dia vita amin'ny takelaka magnetika misy vovoka mahery izay miverina amin'ny haingam-pandeha avo lenta. Amin'ny alàlan'ny fanapahana azy, dia azo atao amina endrika marika magnetika izay miankina amin'ny fangatahan'ny...
Fametrahan-tsofina vita amin'ny vy manosika fametahana Magnet Mat dia vita amin'ny takelaka magnetika misy vovoka mahery izay miverina amin'ny haingam-pandeha avo lenta. Amin'ny alàlan'ny fanapahana azy, dia azo atao amina endrika marika magnetika izay miankina amin'ny fangatahan'ny...
Shina Mat mpamatsy
Ny Magnet Mat dia vita avy amin'ny haingam-pitaovana maingon-tsofa matanjaka amin'ny lamosina avo lenta. Amin'ny famotehana, dia azo atao amin'ny endriky ny famolavolana maitso izay miankina amin'ny fangatahan'ny mpanjifa. Ny fototra ara-pamokarana dia ampiasaina indrindra amin'ny fametrahana ny kitapo misy solosaina miovaova eo amin'ny rindrina ara-dalàna. Apetraho eo ambony ravin-damba ny kitapom-piraketan-kitapo misy azy, Mialà eo amin'ny taratasy kely avy amin'ny zoron-trano iray ary afatory amin'ny tavy mangatsiatsiaka.
Ho mora kokoa ny fametrahana azy io, matetika ny fametahana ny satroka mataila amin'ny habe.
Angamba mety hitranga amin'ny rindrina isika indraindray, ary mety hanala ny alahelony amin'ny sakana mandritra ny fametrahana ireo singa mora simba.
Magnetic Mat Adhesive-Back Magnet Mat Magnetic Sheet Magnetic Adhesive Self Magnet Mat Magnet Back Magnet Magnetic Planner